Imibuzo evame ukubuzwa - Xiamen Toonney Tungsten Carbide Co., Ltd.
Yini inzuzo enkulu yezimpahla zakho? Yini ubuncane be-oda elincane？
Izinduku zethu ze-tungsten carbide rod namathiphu e-carbide adume ngekhwalithi ephezulu nentengo yokuncintisana. Izinzuzo zekhwalithi enhle ngokulawulwa kwekhwalithi eqinile nomugqa wokukhiqiza wezobuchwepheshe ophakeme. Abukho ubuncane be-oda lobuncane bezinduku ze-carbide ye-oda lokuqala lokulingwa. Kepha ku-oda lesibili, inani eliphelele lezinduku ze-carbide akufanele libe ngaphansi kuka-1000USD.
Yimiphi imigomo yakho yokukhokha uma ngifuna ukuthenga ezinye izinduku ze-carbide noma amathiphu e-carbide?
I-T / T kuzoba ukukhetha okungcono. I-L / C ne-Western Union nazo zamukelwa. Ukukhokha okungama-30% kufanele kwenziwe ngaphambi kokukhiqiza, futhi ibhalansi engu-70% kufanele ikhokhwe ngaphambi kokuthunyelwa. Noma u-L / C lapho ubona ama-oda amakhulu.
Sinikeza insizakalo ephelele emva kokuthengisa kumakhasimende. Sizoqala inqubo yesevisi ngemuva kokudayiswa kanye lapho sithola noma yisiphi isikhalazo sokusetshenziswa kwemikhiqizo yethu. Okokuqala, sizokwenza isinqumo esiyinhloko sale nkinga, bese sizama ukukusiza ukuxazulula le nkinga nethimba lethu lobuchwepheshe lobuchwepheshe. Uma singakwazi ukuthola inkinga ngokusho kombiko wakho, lapho-ke singadinga usizo lwakho ukuthumela ezinye izinto ezimbi (vele, sizokhokhela imali yokuthumela) ukuze kwenziwe olunye uphenyo. Ngemuva kokubheka izinto ezinenkinga, sizothola isizathu nesixazululo, khona-ke sizokunikeza isisombululo esihle. Uma kunesidingo, sizokwenza kabusha imikhiqizo emisha efanelekile ngokukhululekile ukuze ithathelwe indawo. (Isandulela kumele ukuthi inkinga ikhonjiswe ukuthi ingumkhiqizo uqobo, hhayi ezinye izinto, njengokuklanywa okungalungile, ezinye izinkinga ngenxa yokuthunyelwa)
Unganginika eminye imininingwane mayelana nefektri yakho ye-carbide rods?
Ifektri iToonney inezitezi ezintathu, ama-workshops ahlanganisa cishe ama-8000 square metres. Sinomugqa ogcwele wokukhiqiza kusuka ekulungisweni kwefomula kuya emikhiqizweni yokugcina eqediwe, ukuxubana kwe-wax nomshini wokomisa, isigayo sebhola, ukukhipha isithombisi somlilo we-Sintering, Cindezela, i-CIP, umshini wokwenza i-CNC, umshini we-extrusion, isithando somlilo. Nemishini yokuhlola, isibonelo, isibonakhulu se-metallographic magnification, i-HV, i-HRA test, i-SEM, i-carbon analyzer, i-T-RS test. Izinzuzo zeToonney yiqembu lazo lobuchwepheshe lobuchwepheshe kanye ne-systerm eqinile yokulawula ikhwalithi. Siyakwamukela ukuthi ubambisane nathi kule mboni.
Iyini imakethe yakho eyinhloko ye-carbide rods?
Imakethe enkulu yezilwandle yezinduku zethu yi-USA, i-Europe ne-Asia. Siqale ukwenza ibhizinisi lenduku ye-carbide selokhu kwasungulwa inkampani ngo-2011. Ngaphambi kwalokho, ithimba lethu lobuchwepheshe belilokhu lakha futhi lithumela isithando somlilo sintering, ngaphezu kwalokho, siphinde sakha uphawu lwesihlalo sobukhosi esihlalweni somshini okhiqiza izinto zensimbi kanzima kusukela ngo-2008, uphawu lwase-Asia oludumile manje lungolwakho kwenye inkampani yethu isihlalo sobukhosi I-VACUUN TECHNOLOGY COMPANY.
Iziphi izitifiketi onazo zezinduku ze-carbide noma amathiphu e-carbide?
Kuze kube manje, sinamalungelo obunikazi abangu-9 ku-carbide rods kanye nokukhiqizwa kwamathiphu.
Idivayisi yokwakha i-extrusion isetshenziselwe ukukhiqizwa kwe-tungsten carbide
Ithuluzi elisetshenziswe ku-carbide blank demaching machining
Sesimbembembe isetshenziswa isikhunta core machining
Lombhalo isetshenziswa isikhunta nib machining
Idivayisi ekhipha ukukhwabanisa yesithando sintering
Isigaxa se-frustum sigaya nge-chamfer ekhathazayo
Ngabe inkampani yakho ibibambe iqhaza kunoma yimuphi umbukiso wezohwebo?
Siya eConon fair, i-CIMT, i-Fasten embukisweni, i-DMC e-China minyaka yonke, futhi saqala uhlelo lwethu lombukiso lwaphesheya kwezilwandle unyaka wesibili ka-2015. Umbukiso wokuqala wezokuhweba esiya kuwo kwakungu-FEBTECH2015 eChicago.
Ungakwazi yini ukwenza izinduku ze-carbide ezenziwe ngokwezifiso noma eminye imikhiqizo ye-carbide?
Yebo. Bonke usayizi nokuma kwezinduku ze-carbide noma eminye imikhiqizo kungenziwa ngezifiso. Isibonelo, izinduku ezinesimo sesinyathelo, ithiphu ye-carbide nezinhlobo ezahlukahlukene, ngokusetshenziswa okuhlukile, zingaba nzima kakhulu ngezidingo zamakhasimende ngamunye. Ngokwezifiso ngakunye, udinga nje ukuchaza imfuneko ngokuningiliziwe, noma okungcono ngemininingwane yokudweba, lapho-ke sizokwenza imikhiqizo ngokuya ngezidingo zakho.